ग्रीनसिटी अस्पतालको ज्यादतिबिरुद्ध जनता
प्रल्हाद खकुरेल– स्वास्थ्यसेवा दिन्छु भनेर खोलिएका अस्पतालमध्ये ग्रीनसिटी अस्पताल जनता लुट्ने अखडा बनेको छ । मान्छेको ज्यानसँग खेलबाड गरेर गिद्धले सिनो लुछेझैं मान्छेको जीवन लुट्ने अस्पताललाई कारवाही हुन्छ कि हुन्न ? मेडिकल काउन्सिल छ, चिकित्सक संघ छ, जनतामाथिको अत्याचार किन हेर्दैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय त कमिशनको अखडा भइहाल्यो, हेरेन हेरेन, स्वास्थ्य सेवामा लाग्ने विज्ञ विशेषज्ञहरुले जनतामाथि भइरहेको ज्यादतिबारे बोल्नुपर्ने होइन र ,
कसैले नबोल्ने हो भने जनता सडकमा निस्कनुपर्ने हुन्छ । जनताले नै यस्ता जुकाहरुको अपरेशन गर्नुपर्ने हुन्छ, यसतिर सरकारले तत्काल ध्यान देओस् ।
ग्रीन सिटी अस्पताल भनेको बिरामीको उपचारको नाममा मृत्युसैयामा पु¥याउने अस्पतालको रुपमा बदनाम छ । यो त्यही अस्पताल हो, जसले अन्यत्र लैजान लागेका बिरामीलाई समेत खोसेर अस्पताल लैजान्छ र बिरामीका परिवारसँग बेस्सरी पैसा असुलेपछि बिरामीलाई अन्यत्र पठाउने काम गर्छ कि मृत्युसैयामा पु¥याइदिन्छ । ग्रीनसिटी अस्पताल नभएर चिहान बन्दैछ ।
ग्रीनसिटी अस्पतालका अनेक काण्डहरु बाहिरिन थालेका छन् । यो अस्पतालका सञ्चालक छन्– लोक बहादुर टन्डन । उनी हरेक अस्पताल, सामुदायिक एम्बुलेन्स चालकहरुसँग सेटिङ मिलाउँछन् र सस्तो र राम्रो उपचार हुने नाममा बिरामीलाई पैसा कमाउने हतियार बनाउँछन् । कतिपय एम्बुलेन्स चालकहरु त कमिशनकै लागि टण्डनसँग सोधेर जान्छन् र बिरामीसँग पैसा छ, पैसा निकाल्न सक्छ भनेपछि ग्रीनसिटी अस्पताल लैजाने गर्छन् । यी टण्डन राजधानी वरपरका नजिकका छिमेकी जिल्लाहरुमा एम्बुलेन्स खरिद गराएर विचौलियाका रुपमा चालकहरु राखेका र परिचालित गरेका छन् ।
पत्रकार तथा कलाकार देव लामाका परिवार पनि यिनै टण्डनको चक्करमा फसाइए । उनको सम्पूर्ण जायजेथा बेचेको ४२ लाख सम्पत्ति उपचारका नाममा यिनैले अशुल गरे र उनका परिवारजन यतिबेला सडकमा पुगेको छ । यस्ता पीडित परिवारहरु बिस्तारै ग्रीनसिटीका विरुद्धमा बोल्न थालेका छन् ।
लोकबहादुर टण्डन पहिले बदनाम भएको नेटवर्क व्यवसाय युनिटी लाइफका लिडर हुन् । लामो समय फरार रहेपछि पक्राउ परेका टण्डन डेढ करोड धरौटीमा रिहा भएका हुन् । त्यसपछि फेरि पक्राउ परेका यिनले फेरि पनि सेटिङ मिलाएर छुटे । अहिले ग्रीनसिटी अस्पताललाई लूटको अखडा बनाइरहेका छन् ।
ग्रीनसिटी अस्पताल उपचारको थलो हो कि मृत्युको ? ग्रीनसिटी अस्पतालका करतुतहरु विरुद्ध युवाहरु एकजुट भएका छन् । पीडितहरु सडकमा आउन थालेका छन् । सम्बन्धित निकायहरुले छानबिन र कारवाही प्रक्रिया अगाडि नबढाए छिटै यो अस्पताल र यसका सञ्चालक टण्डनविरुद्ध आमनागरिकहरुले सडक कारवाही गर्नेतिर आक्रोसित भइरहेका छन् । लोकबहादुर टण्डनलाई केही वर्ष अघि बिपत्ति मच्चाउने चितवनको ध्रुवे हात्ती बन्न नदिने पक्का छ ।